musha Asia Munyu Bae Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeChirungu cheTurkey uyo akaberekwa ane zita “Nusret Gokce". Yedu Munyu Bae Childhood Nyaya pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu hwake. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvinyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva yemutambo wake wekudisa munyu. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Nusret Gokce's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Munyu Bae Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Nusret Gocke akaberekerwa mu1983 kuErzurum, Turkey. Akaberekwa naamai vake Fatma Gocke uye kuna baba vake Faik Gocke (mushandi wemagetsi).
Vechidiki Gocke yaingova nemakore 2 apo mhuri yake yakabva panzvimbo yake yekuberekerwa muguta reTurkey kumabvazuva yeErururum kusvika kuguta reDarica riri kugungwa. Zvakanga zviri kuDarica izvo vechidiki Turk vakakurira pamwe chete nehama dzake Ugur, Ozgur naErman.
Kukura semwanakomana wemuiri wemagetsi muDarica, Gocke akagara mararamiro ehupenyu pamwe nemhuri yake. Somugumisiro, wechidiki uyu akanga ari murombo mumutauro wose wezwi kunze kwokuti ane tariro yehupenyu uye chido chekuzarura resitorendi.
"Ini ndaigara ndichishuvira uye ndichida kuvhura resitorendi".
Akayeuka Gocke kuNBC Nhau. Makore mashoma gare gare, dzidzo yaGocke yakaunzwa zvine simba kumugumo, ichipa wechidiki mukana wekuti achinje zvido zvake kuti zviitike.
"Ndakapedza chikoro chesekondari mu1994 pandakanga ndava nemakore 13. Shure kwaizvozvo, ndakasiya chikoro nekuda kwematambudziko emari ndokutanga kushanda semudzidzi wekuchera ".
Munyu Bae Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Basa Kuvaka
Gocke akapedza makore anotevera 13 ehupenyu hwake achishanda semudzidzi wekuchera musha panzvimbo yeKadıkoy, Istanbul uye kuTurkey steakhouses.
VERENGA Vladimir Putin Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
"Maoko emucheka wangu akanga akareba uye bhandi rangu rakazorora pasi. Ndaifanira kumira padare remvura kuti ndinosvika pakero. "
Anoyeuka Gocke kubva pakutanga kwake.
2009 raive gore iro Gocke yaakaenda kuBuenos Aires, Argentina nechinangwa chekuwana ruzivo rwepasirese nezve indasitiri yenyama. Hazvina kutora nguva refu asati atanga kufamba asinga rambe achienda kuUnited States kune 'nyama yekushanya' uye akazopedzisira abudirira kunyangwe nekushanya kupfupi.
“Pasina mari yakawanda, ndakaenda kuArgentina kunoona indasitiri yenyama uye mushure mezvo, ndaida kuenda kuUnited States, asi ndakarambidzwa vhiza kashanu kana katanhatu, asi handina kukanda mapfumo pasi ndikawana vhiza yemwedzi mitatu mukupera kwa3 ″.
Gocke akajekeswa akadzokera kunyika yake (Turkey) uye akazarura doro rake rekutanga rainzi Istinye Park Shopping Mall kuIstanbul. Iyo yokudyira yaiva nematafura masere chete nevashandi ve10 kusvikira mutengesi weTurkey ainzi Ferit Sahenk akamira nekudya uye akashamiswa nesangano rose.
Sahenk yakasimudza mubhizimusi rekudzivirira nekudaro ikapa Gocke nemari yakawanda yakashandiswa kutanga zvinyorwa zvekare mune nzvimbo dzinosanganisira Ankara Doha ne Dubai. Kufambira mberi zvakanyanya kusvika nhasi Gocke haina zvishomanana kupfuura zvekudya zve13 pasi pose uye nevashandi vanopfuura 600.
Munyu Bae Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Goko raiva bhizinesi rakagadzirwa rinozivikanwa kune vashoma vashoma uye vatengi kusvikira gore 2017 paakava inzwa ye internet. Kubudirira kwakauya mushure mokutumira mahofisi a Instagram Video ayo akamubata kunyorera a steak uye nekukanda kutura munyu pairi.
Vhidhiyo yakagamuchirwa zvakanaka, inotarirwa pamusoro peizvi 10 mamiriyoni, yakashandurwa kuva zvipo uye yakagoverwa nemuimbi Bruno Mars.
"Chaizvoizvo kufamba ikoko pakuguma [salting] kwakauya kamwe chete. Handina kuita izvozvo kuratidza. Icho chiri kungosayina kwangu. Iwe unogona kufunga pamusoro paro rudzi rwekupedzisira rwekugadzira. Yakanga iri yekupedzisira kubata nyama; Ndakanga ndichikomborera nyama ".
VERENGA Asuka Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Pasina nguva refu, vanhu vazhinji uye vanozivikanwa vanosanganisira Leonardo di Caprio yakamiswa naGuske's Nusr-Et Steakhouse muAud Dhabi kuti vamutarise iye pachake achivashandira ne steak uye aite senge isingaperi nguva yemitambo yekusasa munyu.
"Chimiro che nyama uye kunhuvira kwayo kutanga kubva kumusoro kumusoro chikamu changu. Zvose manzwiro angu ari kuuya kubva mukati memhuka kusvika apo pandinoisa munyu panyama ".
Anonyora Goko pamusoro pemhepo iri shure kwekufamba kunoshamisa. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Munyu Bae Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Ichitevera Gocke ichikwira mukurumbira, vazhinji vakafunga kuti iye akaroorana apo vamwe vamwe vakafananidza mifananidzo yaakatora neboka rehama duku kuti vave vana vake.
Kugadzirisa Gocke yakataura kuti iye ari mumwe chete uye akachera. Maererano naye:
"Handina kuroorwa. Ndiri kushanda zvakasimba saka handina nguva yekuda musikana. Aida kuda kuzvipira, kuenda kunotenga, kuenda kumafirimu. Angave akanaka muvhiki yekutanga, asi zvinoda kuti zvipinde. Handigoni kumuudza kuti auye kuzomirira paresitorendi kwemaawa 20. "
Munyu Bae Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Munyu Baeya vakaonekwa mune imwe nharaunda yeNarcos, vanoshumira nzira yake yeMhuka kune vanyori veTV.
[svinura url = "https://www.youtube.com/watch?v=Ta44Ej-VXXg" /]
Zvokudya zvake zvekudya zvakambobudiswa paNew York Times.
Goko rakauya pasi pekutsoropodza kwekupedzisira kwe2017 nekuisa Instagram Instagram iyo yakamuita iye achiita saiyo yakakurumbira Fidel Castro weCuba. Iye, zvisinei, akatora nzvimbo iyo nguva pfupi gare gare.
Peji yake yepaIndaneti yekutsvaga yekutengesa ine imwe yevamwe vateveri vakuru vekuzvirumbidza kwevamwe vashoma kupfuura vateveri veMamiriyoni 12.2.
Pakupedzisira 2018 Videos yeMutungamiri weVenezuela, Nicolás Maduro kudya panzvimbo yekudya yeGocke yakakonzera kushamiswa nevakawanda vanotaura mafury pamusoro pekuti nei Mutungamiri anoita zvokudya zvekufambisa asi zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveVenezuelan vari kutambura nenzara.
[svinura url = "https://www.youtube.com/watch?v=rrcljW31Tew" /]
Gungwa Rake rakapiwa kushidzira pose rakatevedzwa nevakawanda nguva Rihanna kamwe vaipfeka shati ichiratidza pose.
Munyu Bae Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Munyu Bae Baeti ndivo vakagadzirirwa uye vanoita zvekutya zvikuru avo vakapedza chikamu chakanaka chehupenyu hwake panyama. Kunyange zvakadaro anozvichengeta pachake sezviri pachena mubasa rake rakabvaruka, bvudzi rakatsvuka rakatsvuka rinogona kushandurwa nyore nyore kumurume bundu uyewo rakanaka rakarongedzwa nechiso chekudzivirira.
Izvo zvinokwana kutaura kuti Munyu Baeya ane unhu hwakanaka hunokumbira ruregerero kuna Bruno Mars "unoshamisa nenzira iyo iyo".
Munyu Bae Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Munyu Baeya havasi imwe yekuita mararamiro ehupenyu husina kunaka pasinei nekumuka kwake mukurumbira uye kubatsirana kunobatsira.
"Hupenyu hwangu hauna kuchinja iye zvino. Ndichiri kuramba ndichishanda kubva mangwanani kusvika pakati peusiku. "
Anozivisa. Mutungamiriri uyo anogara muhotera pedyo neresitorendi yake anotanga zuva rake nekushanda pashure pacho anodya puroteni yakakosha kudya. Anobva apedza kushanda, kusangana nevashandi vake, kuita zvaanoita zvakanakisisa, anodzokera kumba pakati peusiku uye akarara kwemaawa 4 chete. Tough chiito chekutevera ?. Hongu zvechokwadi.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Salt Bae Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!